Amerika Latina · Oktobra, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Oktobra, 2013
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Oktobra, 2013
Lasa Tsenaben'ny Fanaraha-maso Ara-Teknolojia i Brezila
Brezila 31 Oktobra 2013
Fanararaotran'ireo goavana iraisampirenena momba ny fanaraha-maso nomerika indray i Brezila noho izy mampiatrano ny Mondialy sy ny Lalao Olaimpika.
Manao Diabe Ireo Mpianatra Shiliana Mba Hitaky Fanavaozana Ny Rafi-Pampianarana
Shily 31 Oktobra 2013
Anisan'ny fanentanana ankehitriny mitaky ny fanavaozana ny rafi-pampianarana ao amin'ny firenena ny fihetsiketsehana. Mandrisika ireo kandidà mba hizara tsanga-kevitra mivaingana amin'ny fanavaozana ny rafi-pampianarana ireo mpianatra tamin'ity indray mitoraka ity.
Nibahana Tamin'ny Blog Action Day Tao Brezila Ny Fahalalaham-pitenenana sy ny Zo Hahazo Vaovao
Mbola olana horesena ao Brezila ny sivana antserasera sy ny famoretana ataon'ny polisy eny an-dalambe. Manoratra ireo bilaogera.
Nahemotra Ny Fotoam-pitsarana An'i Fujimori Noho Ny Toe-pahasalamany
Però 30 Oktobra 2013
Maro ireo tsy resy lahatra tamin'ny filazana momba ny toe-pahasalaman'ny filoha teo aloha, izay tokony hiiatrika fitsarana momba ny fividianana lahatsoratra fanadihadiana antserasera an'ireo gazety sasany noentina nampiroboroboana ny fifidianana azy indray tamin'ny fifidianana filoham-pirenena.
Fanaovam-beloma An'ilay Mpilalao Baseball, Mariano Rivera
Panamà 29 Oktobra 2013
Nitsahatra tamin'ny asa maha-mpanipy baolina azy ilay Panameana iray Mariano Rivera, namela andianà tahirin'isa sarotra ihoarana. Naneho ny fankasitrahany ireo media sy ireo rohin-tambajotra sosialy maro.
Mampiseho Ny Fifanenjanan'ny Vehivavy Sy Ny Lehilahy Kiobàna Ny Firoborobon'ny Famoronana Orinasa
Karaiba 27 Oktobra 2013
Nahatonga ny fitomboan'ny miasa tena ny fiovàn'ny lasitra ara-toekaren'i Kiobà, mpiasa tena izay takarina amin'ny hoe tsy ampiasain'ny fanjakana
Michael Urtecho, i Mpikambana Ao Amin'ny Kongresy Peroviana Voaheloka Ho Nanao Kolikoly
Però 27 Oktobra 2013
Ampiatona amin'ny asany mandritry ny 120 andro i Urtecho ary hosaziana araky ny lalàm-panorenana. Raha toa ka voaporofo fa tafiditra aminà raharaha maro izy dia ho gadraina 15 taona an-tranomaizina.
Nahoana No Any Am-ponja i Sonia Garro, ilay Kiobàna Mpanohitra ?
Karaiba 24 Oktobra 2013
Mpikambana ao amin'ny mpanohitra "Damas de Blanco", fikambanan'ny vehivavy mpanoro hevitra ho an'ny fanafahana ireo gadra politika any Kiobà i Garro.
Afaka Atao Fonenana Ve Ao? Tsy Fisianà Sisintany & Mponina Anaty Aterneto
Etazonia 22 Oktobra 2013
Ny firenena, ny tany, ary ny fiaviana dia mbola loha laharana hatrany ary tena manan-danja hatrany tokoa eo amin'ny sehatra maro, kanefa efa tsy dia voafaritra mazava tsara intsony na tsy voafehy toy ny teo aloha intsony.
Lavin'ny Filohan'i Panama Ny Mahavoarohirohy Ny Zananilahy Amin'ny Afera Maizina Italiana
Panamà 19 Oktobra 2013
Miditra amin'ny Twitter ny Panameana hitsipahana ny fomba fandavan'ny filoha Ricardo Martinelli ny mahatafiditra ny zananilahy amin'ny aferan-kolikoly Italiana.